MKV in ISO - Sida loo Beddelaan MKV in ISO (Windows 8 ka mid ah)
1. Beddelaan MKV in ISO
2. Beddelaan Video TS in ISO
3. U beddelaan MP4 in ISO
4. Guba ISO in DVD
> Resource > DVD > Sida loo Beddelaan MKV in ISO (Windows 10 ka mid ah)
Sida loo Beddelaan MKV in ISO (Windows 10 ka mid ah)
MKV waa qaab weel multimedia sare u HD videos. Waqtigan xaadirka ah, MKV waa firfircoon dheeraad ah oo ku kombiyuutarada ka badan ciyaaryahan, ay sabab u tahay qeexidda sare iyo video tayada fiican. Dad badan ayaa jeclaan lahaa in uu badalo MKV video oo markaas waa inuu ku gubaa si an file ISO image. Halkan waxaan ku talinaynaa MKV ah in Converter ISO si aad uga taas samaysay iyadoo (Windows 10 ka mid ah).
Wondershare DVD Creator waa MKV fiican Converter ISO inuu kaa caawiyo inaad badalo files MKV in ISO si fudud. Ka sokow, waxa ay bixisaa badan bedeley DVD free qurux badan u DVD qoraalka fiican iyo Tifaftiraha dhisay-in gelineya inaad xaalkaa videos si dhakhso iyaga retouch! Haddii aad isticmaalayso Mac ah, fadlan isticmaal DVD Creator for Mac si ay u abuuraan ISO ka MKV (Snow Leopard, Libaaxa, Mountain Libaaxa ka mid ah). Tallaabooyinka loo badalo file MKV in ISO ee Mac iyo PC waa isku mid. In hage soo socda, waxaan qaadi Win version tusaale ahaan.
Free download MKV in Converter ISO ay gubaan ISO ka MKV video files:
Sida loo badalo MKV in tallaabo ISO talaabo:
Tallaabada 1. Load MKV video files barnaamijka
Ku dar videos in DVD Creator ah adigoo gujinaya "Import" iyo dhirta files ka your computer. Added videos lagu soo bandhigi doono suuqa kala bidix ee thumbnails. Waxaad si fudud u soo jiidi kartaa jeedi in la beddelo si video iyo abaabulo DVD horyaal.
Tallaabada 2. Edit MKV videos
Tani MKV in ay gubi ISO waxay bixisaa qaar ka mid ah hawlaha video tafatirka aasaasiga ah sida cut, jar, isku shaandheyn, dalagga, iyo dar watermarks iwm Si aad u samayn, guji badhanka edit ah video dhinaceeda, ama muujiyo video ah & xaq u riix, ka dibna dooro "Edit" in la furo suuqa kala video tafatir ah.
Tallaabada 3. Habee DVD bedeley aad
Dooro ka marto menu DVD free dhisay-in oo shakhsiyeeyo menu la beddelo badhamada, mab, soo jeeda, thumbnails, iwm
Tallaabada 4. Kulanka Xiisaha iyo badalo MKV in ISO
Ka dib markii dhammaan goobaha, ku eegaan mashruuca DVD ah oo taga si "Guba" tab, doortaan "Image File Save ISO" oo ku dhacay "Guba" badhanka si ay u bilaabaan si ay u abuuraan ISO ka files MKV.
Iyadoo MKV xirfadeed si Converter ISO, waxaad ka heli doontaa waxa ay inta badan ka sahlan si loogu badalo files MKV in image ISO files si aad iyaga ku raaxaysan kartaa sida aad jeceshahay.
< File MKV waa file Matroska ah. Matroska waa qaab weel il xor ah oo furan Russia. Waa mid ka duwan in AVI iyo MP4 ah qaabab loo jecel yahay. Waxaa loola jeedaa ma qaab MKV ka xun yahay kuwa caanka ah qaabab video. Files MKV leedahay faaidooyin:
1) oo ay taageerayaan kuwan raadkaygay audio badan.
2) raadkaygay Cinwaan Multiple.
3) taageerada Cutubka sida DVD movie
4) Taageerada Dolby Digital 5.1 iyo DTS audio.
Marka aad gubi MKV in files ISO, tayada wax soo saarka waa furaha. Nasiib wanaag, la Wondershare DVD Creator , waxaad si fudud u qaadan kartaa "tayo sare leh", "Standard Quality" ama "taam u disc" in ay ku haboon baahida aad ugu fiican.
Sida loo Beddelaan / Guba TS in DVD ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
Top 10 Open Source DVD gubidda
3 talooyin looga cabsado, waayo, iDVD Dulucda